चुरोटभन्दा पनि खतरनाक हुन्छ ई–सिगरेटः फोक्सो फेल गराउँनेदेखि मानिसको मृत्युसम्म – Pradesh Online Khabar
चुरोटभन्दा पनि खतरनाक हुन्छ ई–सिगरेटः फोक्सो फेल गराउँनेदेखि मानिसको मृत्युसम्म
स्वास्थNo Comment on चुरोटभन्दा पनि खतरनाक हुन्छ ई–सिगरेटः फोक्सो फेल गराउँनेदेखि मानिसको मृत्युसम्म
जभोलि हरेक मानिसको हात–हातमा ई–सिगरेट देखिन्छ । मानिसहरुमा यो फेसनकै रुपमा विकसित भएको पाइन्छ । अझ धुम्रपानका लत लागेकाहरु ई–सिगरेटको हानी कम हुने विश्वासमा यसको प्रयोग गरिरहेका पाइन्छ ।यसमा पनि विषाक्त रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरिने भएकाले यसको लामो समयसम्म प्रयोग गर्न नहुने विज्ञहरु बताउँछन् ।
ई–सिगरेटको कारण ३ जनाको मृत्यु:भर्खरै अमेरिकामा यो चुरोटको सेवनबाट फोक्सोमा असर परेको कारण लगभग ५ जनाको मृत्यु भएको छ । अधिकारीहरुका अनुसार यसको कारण सयौँ मानिसहरु फोक्सोको विरामी भएका छन् । यसका साथै यसको सेवन गर्ने किशोर किशोरी कोमामा समेत जाने र गम्भीर विरामी हुने गरेका छन् । यसको सेवनका कारण ४५० भन्दा बढी फोक्सोको विरामी भएका छन् । स्वास्थ्य विभागका अनुसार यो चुरोटमा भिटामिन इको मात्रा अत्याधिक भएको कारण मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । के हो ई–सिगरेट ?:ई–सिगरेट अर्थात इलेक्ट्रोनिक सिगरेटलाई पर्सनल वेपोराइजर पनि भनिन्छ । यो इलेक्ट्रोनिक इन्हेलर हो जसले यसमा भएको लिक्विडलाई धुवामा बदलिदिन्छ । यो कोट्रिज, ऐटमाइजर, ब्याट्री र लिक्विडबाट बन्छ ।
किन हानिकारक छ ?:यसमा भएको केमिकलले ई–तरल पदार्थले एन्डोथेलियल कोशिकाहरु, डिएनएको नोक्सान र कोशिकाहरु मार्ने अणुहरुको वृद्धि गर्छ । यसका साथै यो चुरोटमा प्रयोग गरिने फ्लेबर दालचीनी र मेन्थललाई एकैसाथ पिउँदा बिरामी हुने सम्भावना पनि बढछ । यसले फोक्सोलाई पनि असर गर्छ ।
सामान्य चुरोट र ई–सिगरेटको असर उस्तै:इलेक्ट्रोनिक चुरोट र परम्परागत चुरोटको असर उस्तै हुने गर्छ । ई–सिगरेटको धुँवा बाहिर फालेको मात्र देखिन्छ तर यो पूरै केमिकलयुक्त हुन्छ ।ई–सिगरेटमा निकोटिनको साथसाथै बास्नादार केमिकल पनि भरिएको हुन्छ । जुन सिधै फोक्सोमा पुग्छ । जसले फोक्सोमा क्यान्सरको सम्भावना पनि बढाउँछ ।